हामीतपाईंलाईकसरीमद्दतगर्नसक्छौं | VTLawHelp.org
भेरमोन्ट लिगल एड (Vermont Legal Aid) र ल लाइन अफ भेरमोन्ट(Legal Services Vermont) ले भेरमोन्टमा बसोबास गर्ने निम्न-आय भएका मानिसहरूलाई नि:शुल्क देवानी (गैर-आपराधिक) कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँछन् । हाम्रो सेवाहरूको लागि कुनै शुल्क लाग्दैन ।
हामी सहायता आवश्यक पर्ने सबैलाई मद्दत गर्न सक्दैनौं । हाम्रो परियोजनाहरू मध्ये अधिकांशमा आय सीमाहरू रहेको छ र हामीसँग हामीलाई फोन सम्पर्क गर्ने सबैलाई मद्दत गर्न पर्याप्त अधिवक्ताहरू छैनन् ।
हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर थाहा पाउन कृपया हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुहोस् । हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन वा अदालतमा आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सहायताको सूचना तपाईंले कहाँबाट पाउनुहुन्छ भनेर बताउन सक्छौं ।
हामीसम्म कसरी पुग्ने
हामी तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छौं भनेर जान्न 1-800-889-2047 मा फोन सम्पर्क गर्नुहोस् ।
हाम्रो कार्यालय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 8बजेदेखि बेलुका 4बजेसम्म खुल्ला रहन्छ ।
हाम्रो फोन लाइनहरू व्यस्त हुन्छन् ! तपाईं हामीसम्म तुरून्तै नपुग्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले कुनै आपतस्थिति बारे हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नको लागि अन्तिम समयसम्म नपर्खनुहोस् !
यदि तपाईं हाम्रो भ्वाईसमेलमा पुग्नु भयो भने सन्देश छोडिदिनुहोस् र हामी तपाईंलाई फोन सम्पर्क गर्नेछौं । आफ्नो फोन नम्बर र तपाईंलाई भेट्ने उत्तम समय दिनुभएको छ भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
यदि तपाईं अंग्रेजी बोल्नु हुँदैन भने तुरून्तै एकजना दोभाषेको लागि अनुरोध गर्नुहोस् । हामीले एउटा दोभाषे नि:शुल्क उपलब्ध गराउनेछौं ।
तपाईंलाई हाम्रो अधिवक्ताहरू मध्ये कुनै एकजनासँग कुरा गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर जान्नको लागि हामी तपाईंलाई केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि भन्नेछौं । यसलाई “ग्रहण”प्रक्रिया भनिन्छ ।
उदाहरणको लागि, हामी तपाईंलाई निम्न बारेमा प्रश्नहरू सोध्ने छौं;
ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, उमेर, तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ वा हुनुहुँदैन र तपाईंको घरपरिवारमा कति जना सदस्यहरू छन् जस्ता व्यक्तिगत जानकारी
तपाईंले कुरा गर्न खोज्नुभएको समस्या वा मुद्दाको बारेमा
हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर निर्धारण गर्नको निम्ति तपाईंको आय र सम्पत्तिहरूको बारेमा
तपाईंले हामीलाई दिने सबै जानकारी अधिवक्ता/सेवाग्राही विशेषाधिकारद्वारा सुरक्षित गरिन्छ र साझा गरिने छैन ।
हाम्रा कर्मचारीहरूले तपाईंलाई कसरी उत्तम तरिकाले सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गर्नेछन् ।
तपाईंको परिस्थितिको आधारमा र यदि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईंले निम्न सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ:
टेलिफोनबाट कानूनी सल्लाह
हुलाक चिठीद्वारा तपाईंलाई पठाइने जानकारी
सीमित कानूनी अनुसन्धान
कानूनी प्रतिनिधित्वको लागि कर्मचारी वा स्वयंसेवक अधिवक्ता समक्ष प्रेषण
सल्लाह वा प्रतिनिधित्वको लागि निजी अधिवक्ता समक्ष प्रेषण
हामी आपाराधिक मुद्दाहरू वा ट्राफिक उल्लंघनहरू लिदैनौं ।
भेरमोन्ट लिगल एड, लिगल सर्विसेज ल लाइन अफ भेरमोन्ट र अन्य देवानी कानूनी सेवा संस्थाहरूले देवानी कानूनी मामिलाहरूमा मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । देवानी कानूनी मामिलाहरू त्यस्ता मुद्दाहरू र अन्य कानूनी विवादहरू हुन् जो अपराधहरू बारे हुदैनन् ।
उदाहरणको लागि, देवानी कानूनी मामिलाहरूमा अधिकांश घरमालिक/भाडावाल विवाद, प्रयोग गरिएको कार तथा क्रेडिटकार्ड विवाद र रिच अप(Reach Up) तथा एस.एस.आइ.(SSI) लाभ सम्बन्धि मुद्दा र समान किसिमका विवादहरू ।
सार्वजनिक बचावकर्ता र अन्य कानूनी सेवा संस्थाहरूले मानिसहरूलाई फौजदारी मुद्दाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्छन् जसमा सरकारले कुनै मानिसलाई आपराधिक कार्य गरेको अभियोग लगाएको हुन्छ ।
CARES ऐन – COVID-19 कोरोना भाइरस आर्थिक प्रभाव भुक्तानीहरू/प्रोत्साहन जाँचहरू
अप्रिल 16, 2020 मा अद्यावधिक गरिएको PDF (900 KB) संघीय कोरोना भाइरस राहत कानून (CARES ऐने भनिने) ले संयुक्त राज्यका अधिकांश वयस्कहरूलाई पैसा दिनेछ। IRS ले तपाईंको घरमा पैसा पठाउनेछ वा त्यसलाई तपाईंको खातामा जम्मा गर्नेछ। कर फिर्ता दायर नगरेका केही मानिसहरूलाई पैसा प्राप्त गर्न कर फाराम भर्न आवश्यक पर्दैन। IRS ले संघीय आर्थिक प्रभाव भुक्तानी (EIP… more
COVID-19 कोरोना भाइरसको प्रतिक्रियामा बेरोजगारी लाभहरू
नोट: यो जानकारी अप्रिल 17, 2020 सम्म ठीक थियो, यद्यपि केही जानकारी त्यसपछि परिवर्तन गरिएको हुन सक्छ। कृपया कुनै पनि हालैका अद्यावधिकको लागि vtlawhelp.org मा हेर्नुहोस्। PDF (760 KB) तपाईंले COVID-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा आफ्नो जागिर गुमाउनुभयो वा तपाईंको समय काटिएको थियो भने, तपाईंले सम्भवत: केही मद्दत पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको रोजगारदाताले… more
IRS जरिवाना छुट
करको आचार संहिताले कर हिला दायर गर्ने तथा करिरूको हिलो भुक्तार्नी गर्ने सहितका धेरै भभन्र्न-भभन्र्न अवस्थािरूमा जररवार्नािरू लगाउँछ। कहिलेकाि ं IRS ले जररवार्नािरूलाई िटाउर्न सक्छ। यसलाई जररवार्ना न्यूर्नीकरण वा जररवार्ना छुट भनर्नन्छ। यद्यपप तपाईं जररवार्ना छुट प्राप्त गर्ननका लागग योग्य ठिररर्नुिुन्छ भर्ने पनर्न तपाईंले लगभग सधैं ब्याज… more
IRS संकलन विकल्पहरू
तपाईं IRS लाई भुक्तान गनुुपने रकम 120 दिनदभत्र भुक्तान गनु समर्ु नभएको अवस्र्ामा तपाईंले भुक्तान योजनाको अनुरोध गनु सक्नुहुन्छ। भुक्तान योजनालाई दकस्ता सम्झौतापदन भदनन्छ। तपाईंको भुक्तान प्रदत मदिना $25 भन्दा न्यून हुनसक्छ। तपाईंसँग भुक्तान योजना छ भने IRS ले तपाईंको सम्पदि वा आम्दानी दलनेछैन। तर IRS ले तपाईंका कर दितीिरू दलने छ तर्ा तपाईंको… more
Vermont Legal Aid Brochure - Nepali / नेपाली
Vermont Legal Aid नि:शुल्क नागरिक कानूनी सेवाहरू उपलब्ध गराउने एउटा राज्यव्या पी, निजी, गैर-नाफामुखी कानूनी फर्म हो। हामी हाम्रो Vermont Legal Aid को वेबसाइट (vtlawhelp.org) मार्फ र्फ त जानक ारी तथा स्वय ं-मदत उपकर णहरू पनि उपलब्ध गराउँछौं। हामी न्यून ्यून आय भएका, ज्ये ्येष्ठ तथा असक्षमता भएका र स्वा स्थ्य स्या हार वा स्वा स्थ्य बीमासँग सम्ब न्धि… more
आर्जित आय क्रेडिट
बच्चा र आश्रितहरू सहहतका मानिसहरूको लाश्रि धेरै भिन्ि कटौती र कर क्रेडिटहरू छि्। प्रत्येक कटौती र क्रेडिटका आफ्िै नियमहरू छि्। तपाईंसँि आश्रित िएकोले तपाईंले स्वत: रूपमा यी सबै प्राप्त ििि सक्िुहुन्ि। यो तथ्य पािाले बच्चाहरू सहहतका न्यूि आय िएका पररवारहरूको लाश्रि अनत महत्त्वपूर्ि कर लािको व्याख्या िछि: आर्जित आय क्रेडिट (EIC)। यस क्रेडिटलाई… more
कर्मचारीहरूको कर कट्टी
कर कट्टी भनेको तपाईंको आयकर भुक्तान गनन तलबी चेकबाट ननकाललएको रकम हो। तपाईंले आफ्नो करहरू दायर गदान तपाईंले नतनन बााँकी संघीय आयकरलाई समेट्नको लागग संघीय कानूनले तपाईंलाई आफ्नो भुक्तानीबाट पयानप्त कर कट्टी गनन आवश्यक गराउाँछ। तपाईंसाँग पयानप्त कट्टी रकम छैन भने तपाईंले आफ्नो फिती कर दायर गदान बढी भुक्तान गनुनपनेछ। तपाईंले अनत बढी ननकाल्नुभएको छ… more
रद्द गररएका ऋण तथा तपाईंका करहरू
धेरै मानिसहरूलाई ऋणको "कट्टी" को गणणा करयोग्य आम्दािीको रूपमा हुि सक्छ भन्िे कुरा थाहा हुुँदैि। जब आम्दािी करयोग्य हुन्छ तपाईंले यसलाई IRS मा ररपोर्ट गिुटपछट। धेरैजसो समय तपाईंले कार, घर वा अन्य निजी वस्तुहरू खररद गिटको लागग ऋण निकालेको रकमलाई पुि: भुक्ताि गिुटपिे हुिाले यसलाई आम्दािीको रूपमा गणिा गररुँदैि। तपाईंले ऋण नतिट सक्िुहुन्ि र… more
हाल संकलनयोग्य छैन
तपाईं IRS मा भुक्तान गनन समर्न नभएको अवस्र्ामा तपाईंका ऋणहरूलाई हाल संकलनयोग्य छैन (CNC) ववपवि स्स्र्वतमा रास्िन सक्छ। तपाईं CNC मा भएको बेला IRS ले तपाईंको सम्पवि वलने वा तपाईंको आम्दानी ग्रहण गनेछैन। तर IRS ले तपाईंका कर वितीहरू वलने छ तर्ा तपाईंको गाउँको भूवमका रेकर्नहरूको ग्रहणाविकारलाई दायर गनन सक्छ।
हेल्थ केयर एड्भोकेट (एच.सि.ए.) हेल्पलाइन
हेल्थ केयर एड्भोकेट (एच.सि.ए.) हेल्पलाइन (Health Care Advocate (HCA) HelpLine) स्वास्थ्य सेवा अधिवक्तासँग कुरा गर्नको लागि 1-800-917-7787 मा फोन सम्पर्क गर्नुहोस् । भेरमोन्टको एच.सि.ए. हेल्पलाइन स्वास्थ्य स्याहारसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न भेरमोन्टका सबै बासिन्दाहरूलाई मद्दत गर्नको लागि उपलब्ध नि: शुल्क श्रोत हो । हामी: प्रश्नहरूको… more
सम्बन्धविच्छेद कठिन र तनावपूर्ण समय हुनसक्छ । हामीलाई आशा छ कि यो जानकारी तपाईंको लागि उपयोगी हुनेछ । हामी तपाईंले बुझ्ने गरि अदालती प्रक्रियालाई सरल तरिकाले व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छौं । आशा गरौं कि यसले तपाईंलाई कानूनी प्रणालीसँग व्यवहार गर्दा तपाईंलाई थप आत्मविश्वास महसुस गर्न मद्दत गर्नेछ । तपाईंले यसलाई पार गर्न सक्नुहुनेछ । सुरू गर्नु… more
यस खण्डमा घरेलुहिंसा र दुर्व्यवहारबाट राहत बारे जानकारी रहेको छ । यदि तपाईंलाई दुर्व्यवहार भइरहेको छ वा यदि तपाईं आफ्नो दुर्व्यवहारकर्तालाई छोड्न चाहनुहुन्छ तर तपाईंलाई त्यो कार्य तपाईंले वहन गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ भने तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेको थप जानकारीको लागि बायाँ साइडमा भएका लिंकहरूमा क्लिक गर्नुहोस् । तपाईंले रिलिफ फ्रम… more
निष्पक्ष आवास भेदभाव बिनाको आवास हो । निष्पक्ष आवास भनेको तपाईंले घर किन्दा वा भाडामा लिँदा भेदभाव नगरिनु हो । यसको अर्थ सबै प्रकारका मानिसहरूलाई स्वागत गरिने छरछिमेक वा समुदायमा बसोबास गर्ने अधिकार सबैको हुन्छ भन्ने पनि हो । आवासीय भेदभाव अनेक स्वरूपमा हुन्छ र अनेक भिन्न-भिन्न मानिसहरू विरूद्ध गरिन्छ । भेदभावले हामी कहाँ बस्न सक्छौं र हाम्रो… more
ऋण संकलनकर्ताहरू गर्न नपाउने कुराहरू
यहाँ केही नियमहरू छन् जसलाई ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले भेरमोन्टमा तपाईंबाट ऋण संकलन गर्ने प्रयास गर्दा पालना गर्नैपर्छ । धम्की ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले तिनीहरूले गर्न नसक्ने वा गर्न नहुने त्यस्ता केही कुराहरू गर्न धम्की दिन पाउँदैनन् । उदाहरणको लागि, ऋण संकलनकर्ताहरूले हिंसक हुन वा हिंसक हुने धम्की दिन पाउँदैनन् । तिनीहरूले अपराध… more
Unemployment Benefits in Response to COVID-19 Coronavirus